Golaha Wakiilada Oo Durduro Ku Meelmariyay Wax Ka Bedel Iyo Kaabis Lagu Sameeyay Xeerka Isgaadhsiinta
Hargeysa(Mandheeranews)- Xildibaanada gollaha wakiilada ayaa wax ka badal iyo kaabis ku sameeyay xeerka isgaadhsiinta Somaliland, waxaanay meesha ka saareen kooto xeerkaas ku jirtay oo loo sameeyay shirkadda SOM Cable ee uu leeyahay ganacsade Maxamed Aw Siciid.
Xildhibaanada fadhigan soo xaadiray oo ahaa 71 ayaa aqlabiyad ku ogolaaday wax ka badalkan, waxaanay suuqa xadhkaha Internet-ka ka dhigeen mid xor ah oo aan cidna u xidhnaan doonin isla markaasna la tixgalin doono shirkadaha wadaniga.
Xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi ayaa ugu horayntii faah faahin ka bixiyay xeerkan meelaha waxkabdalka lagu samaynaayo iyo kaabistaba “ In xeerka boosaha iy isgaadhsiinta xeer lanbar 50 laga saaro lana tirtiro xarfaha 9,18,19,20,21 ee qodoba saddexaad ee isla xeerkan, in qodabka saddexaad xarafkiisa 17-aad ee xeerka isgaadhsiinta loo qoro sidan, in wasaaradu ay dhiirigaliso habsami u istcimaalka suuqa xorta ah adeega isgaadhsiinta Internet-ka iyo adeegaya kale ee isgaadhsiinta oo uu ku jiro adeega xadhkaha Cableka iyada oo mudnaanta koowaad la siinayo shirkadaha isgaadhsiinta ee waddaniga ah in loo fasaxo in si aan kala faquuq lahayn umaalgashan karaan, keeni karaan sii dhex marin karaan ka sii gudbin karaan kuna fidin karaan xadhkaha dhulka hoos mara xeebaha iyo dhulka Somaliland, in qodobka saddexaad lagu daro faqrada 18 oo cusub oo u dhigan sidan, xeer isgaadhsiinta JSL waxa uu tirtirayaa kana dhigayaa waxba kama jiraan qoraal ama heshiis cid gaar ah ay la gashay xukuumadda JSL oo khuseeya arimaha isgaadhsiinta noocyadooda kala duwan, kaas oo noqonaaya kooto kana hor imanaaya dastuurka JSL oo si cad u qeexaaya suuqa xorta.”
Intaas kadib guddoomiyegollaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa cod galiyay xeerka waxbadalka iyo kaabista lagu samaynaayo waxaanay u dhacday sidan “ Waxaan ku dhawaaqayaa waxbadalka iyo kaabista xeerka, waxa ogolaaday 68 xildhibaan waxa diiday hal xildhibaan waxa ka aamusay hal xildhibaan guddoomiyahuna muu codayn, wax kabadalka iyo kaabistu sidaas ayay ansax ku tahay.”
Xildhibaanka diiday ayaa ah xildhibaan Cali Barre, oo wax ka bedelka xeerkan lagu sameeyay ku tilmaamay mid dhibaato ku soo kordhinaya suuqyada dhaqaale ee Somaliland, iskana horkeenaya shirkadaha dalka.
Mooshinkan oo ay dabada ka riixayeen shirkadaha Isgaadhsiinta ee dalka ayaa si xawli ah ku socday maalmihii u dambeeyay, waxaanu shalay sida hilaaca u maray golaha wakiilada oo durduro ku meelmariyay.